Io no vokatry ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana ao Bealanana izay tra-tehaka tamin’ity asa ratsy ity. Araka ny tafa manokana nifanaovan’ny mpanao gazetinay tamin’ny mpitandro filaminana, manavatsava any anaty ala mikitroka ireto mpilanja rongony ireto izay mahatratra 30 kg ny entan’ny isan-dahy. Ny harivan’ny faran’ny jolay teo, rongony 24 gony milanja 350 kg nentina 12 lahy no nariany tao anaty alan’i Beandrarezina rehefa tamy ny zandary. Ny 6 aogositra, mbola nisy 14 gony indray nentina 7 lahy. Azo sambo-belona ny iray tamin’izy ireo.
Ny fanadihadiana ity farany no nahalalana fa novidian’izy ireo 50 000 ariary ny iray daba avy any Analabe, Ambanja ary nokasaina hoentina any Analalava izay raisin’ny teratany avy any Atsimo 100 000 ariary. Midika izany fa avo roa heny hatreto ny ivarotany azy. Nolazainy fa tsy misy fantany avokoa ny fivarotan’ilay mpandray azy sy ity mpandray ny entam-barotra ary ireo namany izay tafaporitsaka. Rongony halefa eto Antananarivo sy Mahajanga itony taomina itony, raha ny vaovao azo hatrany.